Ukuze uqale, ngingathanda ukuchazela welithi "efwini" iyonke. Kusho ukuthini lokhu kuwe njengoba umthengi? Ngikholwa ukuthi kwabaningi, leli gama Akucaci, ngakho-ke ngiyokunika kafushane izincazelo.
"Google" - noma yisiphi isakhiwo ama-Inthanethi, linikezwe njengeyunithi inkonzo ngesicelo sakho.
Manje, ake sithi-ke namuhla unomsebenzi ethembisa ukuthi ufuna ukukhuthaza ku-intanethi. Phambi kwakho kukhona umbuzo ngokukhetha inkonzo ingenisa esizayo.
Ekuqaleni, lapho inani abasebenzisi kusayithi lakho cishe siyokwenza eshibhile kancane ngekuhlanganyela ibamba. Ngokuhamba kwesikhathi, iphrojekthi yakho iba ethandwa kakhudlwana futhi manje izici okwabelwana ibamba ayisekho ngokwanele. Umthwalo luyanda futhi ziphoqelelwa ukuya ukusingathwa ozinikele. Kodwa ukuthuthukiswa kwebhizinisi lakho ku-intanethi uyaqhubeka ngokushesha kakhulu futhi ngemva kwesikhashana iseva eyodwa umthamo usuvele akwanele, lokho ukwenze ukuthatha isinyathelo esilandelayo: usebenzisa amaseva amaningi.
Nge isinyathelo ngasinye udinga ukuchitha okungagcini nje ngokuchitha imali kanye nesikhathi kwakho okuyigugu iseva abazinikele, kodwa futhi ukuthuthukisa isofthiwe ingxenye yephrojekthi. A uneconomical kunalokho futhi ukuphumelela kwalezi izandiso lincane kakhulu.
Ukusebenzisa isevisi ifu ibamba PROFI-HOST sezivuma ukukhulisa nekusebenta iphrojekthi yakho Inthanethi ngezithukuthuku izinto ezilandelayo:
* Inani kuncike empeleni abangu bangaki imithombo esetshenziswa. Paid kuphela gigabytes idatha egcinwe;
* Asikho isidingo ukukhokhela iseva kokungenzi lutho;
* Asikho isidingo ukuchitha imali engasetshenziswanga sediski;
* Ufaka kwiphrojekthi "ifu" ibamba PROFI-HOST Awudingi ukuba sikhathazeke ngokuthi izinkinga zezingxenyekazi zekhompyutha. Uma ngokungazelelwe kuzoba khona ukwehluleka on server eyodwa, iphrojekthi yakho sizoshintsha ngokuzenzakalela enye.
Njengoba ojwayelekile, a amasevisi sina ifu, kuhlanganise Hosting PROFI-HOST, etholakala ambalwa, ezindaweni ezenzelwe ngokukhethekile - izikhungo idatha, okuvumela ukuba wenze izipele ezingeni labo cishe yonke imithombo. Ngokuba wena njengomzali umsebenzisi ekupheleni, inikeza ithuba ukubeka iphrojekthi yakho web ayikho iseva efanayo, kodwa iqembu ehlanganisa eziningana nezilandiso nomunye amaseva etholakala izikhungo ezahlukene idatha.
Ngalesi kuze zonke. Bheka wena emakhasini izihloko ezilandelayo.
Amaholo kusukela ActionPay: ukubuyekezwa, izici kanye nezinzuzo
Ukubhodla ngesikhathi ukhulelwe win ngempela
Game Programming: Uhlelo, ikakhulukazi ukudalwa kanye nezincomo